‘पर्यटन प्रबर्द्धन’ का नाममा खर्च त भए तर अनुत्पादक ! - Pokhara News
होमपेज/पर्यटन/‘पर्यटन प्रबर्द्धन’ का नाममा खर्च त भए तर अनुत्पादक !
‘पर्यटन प्रबर्द्धन’ का नाममा खर्च त भए तर अनुत्पादक !
पर्यटन क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि भनेर स्थापना गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
पर्यटन प्रबर्द्धनको नाममा बोर्डबाट रकम लगेर आफ्नो संस्थाको वार्षिकोत्सव, अतिथि सत्कार, भोजभतेर तथा अन्यान्य काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठन थालेको छ ।
हाल देशभित्र विभिन्न नाममा खुलेका ६० वटा जति संस्थाले पर्यटन प्रबर्द्धनको काम गर्दै आएको दावी गर्ने गरेका छन् । तर बोर्डले त्यस्ता संस्थालाई उपलब्ध गराउने रकम फजुल काममा खर्च भएका छन् । पछिल्लो पटक मात्रै रु पाँच करोड बराबरको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको पाइएको हो ।
उनले भने – “पर्वतीय पर्यटन प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको टानलाई बोर्डले रकम उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्छ । विषय भन्दा फरक क्षेत्रमा केही रकम खर्च भइरहेको पनि हो । यसलाई रोकिनु पर्दछ ।” विभिन्न संघ संस्थामार्फत स्वदेश र विदेशमा भइरहेको खर्च समेत अनुत्पादक भयो कि भन्ने टानलाई समेत अनुभव भएको उनको भनाइ छ ।
होटल संघ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाह पर्यटन प्रवद्र्धन भन्दा अन्य बहानामा खर्च हुने गरेको भएपनि पछिल्ला दिनमा त्यस्तो प्रवृत्तिमा केही सुधार आएको बताउछन् । उनले भने – “बोर्डले वार्षिक बजेट बनाउँदा नै कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ । अनावश्यक लाग्ने क्षेत्रमा उसले चासो नराख्दा नै राम्रो हुन्छ ।”
बोर्ड र हान मिलेर पर्यटन प्रबर्द्धन तथा अन्य काम समेत गरिरहेको जानकारी दिदै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै बढी लगानी होस् भन्ने आफूहरुको सदिक्षा रहेको बताए ।
बोर्डले पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि भनेर वार्षिक रुपमा रु ४५ करोड खर्च गर्दै आएको छ । सो रकमको समेत उचित सदुपयोग नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ । पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको खर्च दीर्घकालीन हुने भएपनि प्रबर्द्धनमा गरिने खर्च अल्पकालीन र केवल प्रचारका लागि मात्रै हुने भएकाले त्यस्तो खर्चले प्रभावकारी परिणाम निकाल्न नसकेको बोर्ड स्वयम् स्वीकार गर्छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै जाने बताए । उनले बोर्डलाई सक्षम र सबल बनाउँदै पर्यटन प्रबर्द्धनको क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गरेरै जानुपर्नेमा जोड दिए ।
बोर्डले सन् २०१८ का लागि रु एक अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा पर्यटन बजार प्रवद्र्धनका लागि रु ३३ करोड ५० लाख, जनसम्पर्कका लागि रु ३३ करोड र आन्तरिक सम्पदा प्रबर्द्धनका लागि रु २० करोड बजेट विनियोजित छ ।
बोर्डका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्र सापकोटाले विभिन्न संस्थाले पर्यटन प्रबर्द्धनको नाममा मोटो रकम लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउछन् ।
संस्थागत प्रबर्द्धन गर्ने बहानामा बोर्डको लाखौं रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएपनि नियन्त्रण गर्ने तर्फ पहल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न संघ संस्थाले पर्यटन प्रबर्द्धनको नाममा रु पचास हजारदेखि रु २५ लाखसम्म रकम लिने गरेका छन् । बोर्डमा पछिल्लो दिनमा मात्रै सहयोग माग्दै २०० भन्दा बढी व्यक्तिगत तथा संस्थागत आवेदन परेको छ ।